Linux မှာ Windows ဂိမ်းကစားနည်း Linux မှ
Linux မှာ Windows ဂိမ်းကစားနည်း
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | FileLet ရဲ့ UseLinux, အကြံပြုပါသည်
သင်၏ ၀ င်းဒိုးဂိမ်းများကိုကစားရန်အတွက်ကိရိယာများစွာ၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဝိုင်၊ Dx ဝိုင်၊ဒီသင်ခန်းစာမှာကြည့်ရအောင် ဘယ်လိုတပ်ဆင်ပြီး configure လုပ်နည်း သူတို့တစ်ဦးစီ။
1.1 RAM ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်း
1.2 တိုက်ရိုက် X
1.3 Windows အတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲ
1.4 ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက်မတူညီသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခု
1.5 Windows ဗွီဒီယိုဒရိုင်ဘာများသည် Linux များထက်ပိုကောင်းသည်
2.1 တိုက်ရိုက် X
2.2 Visual Basic, .Net စသည်တို့
2.4 Lutris နှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း
လူတိုင်းသိသည့်အတိုင်း .EXE ဖိုင်များကို Linux ကမထောက်ပံ့ပါ။ ဒီတော့ Windows ပရိုဂရမ်တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နိုင်လဲ။ ကောင်းပြီ၊ အချို့သောပါရမီရှင်များက WINE ဟုခေါ်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Wine သည် emulator မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Linux အောက်ရှိ Windows ပရိုဂရမ်ကိုလည်ပတ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ အကယ်၍ ၎င်းသည် emulator မဟုတ်လျှင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
Wine ဟာ emulator မဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းကတော့ emulators တွေက program တစ်ခုရဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပုံတူပွားခြင်း၊ ၎င်းတွင်ပေးထားသော microprocessor ဗိသုကာပုံစံကိုတုပခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဝိုင်သည် Windows စာကြည့်တိုက်များအတွက်အစားထိုးပေးသည့်လိုက်ဖက်ညီသောအလွှာဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အရာကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။
ကောင်းပါတယ်? ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါ။ အမှန်တရားတစ်ခုခုပြောပါမည်
၀ င်းဒိုး (၎င်း၏မည်သည့်ဗားရှင်းတွင်မဆို) RAM တွင်များသောအားဖြင့် Linux တွင်မတင်ပို့သောပရိုဂရမ်များစွာရှိသည် (ဖတ်ပါ၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ antimalware စသည်) ဝိုင်ကမလုပ်ပါဘူး အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးထက်အရင်းအမြစ်များနည်းပါးသည်။
Direct X သည် Windows ဂိမ်းများတွင်အသုံးများဆုံး API ဖြစ်ပြီးဤ operating system အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ Linux သည် OpenGL ကိုအသုံးပြုသည်။
OpenGL ကိုသုံးမှသာ DirectX လိုအပ်တဲ့ဂိမ်းကို Linux ကဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ OpenGL ကိုတုပပြီး DirectX ကိုတုပစေသည်။
ရလဒ်? သိသာထင်ရှားတဲ့, အတုအခါ, သင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆုံးရှုံး။
ဂိမ်းများသည် Windows တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသလား။ ငါကဂိမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်ကိုသင်တို့အားငါပြောလိမ့်မယ်။ သို့သော် X အဖြေမှာ Direct X emulation ကြောင့်ဖြစ်သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ Direct X7ကိုအခြေခံသောဂိမ်းများသည် Windows နှင့် Linux တို့နှင့်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်သော်လည်း DX9 နောက်ပိုင်းတွင်အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။
Wine ကဒီ system နဲ့ပါ ၀ င်တဲ့ဂိမ်းကိုကစားဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင် Street Fighter IV၊ Resident Evil5သို့မဟုတ် Gear of Wars စသည့်ဂိမ်းများကိုမကစားနိုင်ပါ။
ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက်မတူညီသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခု
WINE ၏အားသာချက်တစ်ခုမှာသင်လိုချင်လျှင်ဂိမ်းဟောင်းကို Windows 95 တွင် သုံး၍ Windows7တွင်အသစ်တစ်ခုကိုလုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင် options များအဆုံးသတ်ရုံသာမက framework, directx နှင့်သင်စဉ်းစားနိုင်သမျှအရာအားလုံးကဲ့သို့သောအခြားပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင် WINE သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝအသုံးချသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၀ င်းဒိုးနှင့်အဆင်ပြေသောဂိမ်းများ၊ x ပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ထားသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ယေဘူယျ WINE ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အခြားသူများရှိသည့်ဂိမ်းများရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ဂိမ်းကစားရန် WINE ကိုခေါ်သည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ အဆင်ပြေသည် PlayOnLinux, ထိုဂိမ်းအတွက်perfectlyုံ configured ကို Windows run ဖို့ WINE ကိုပြောထားသည်။ ဘယ်လိုလဲ?
Windows ဗွီဒီယိုဒရိုင်ဘာများသည် Linux များထက်ပိုကောင်းသည်
စမ်းသပ်မှုအားလုံးကဥပမာအားဖြင့်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ Windows XP နှင့် Linux တို့တွင် Windows ဖွင့်သောအခါ၎င်းတွင် frames များပိုများလာသည်ကိုဖော်ပြသည်။ တနည်းအားဖြင့် Windows တွင်မျက်နှာပြင်သည် Linux ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြန်လည်လန်းဆန်းလာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဗီဒီယိုကဒ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂိမ်းကဇာတိမဟုတ်တာကြောင့်ဒါမှမဟုတ် WINE ဒါမှမဟုတ်တခြား emulator တွေကြောင့်ပါ။ operating system တစ်ခုချင်းစီအတွက်သက်ဆိုင်ရာ native executables ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ အဖြေမှာအခြားအချက်များအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီး၊ Windows အတွက်ဗီဒီယိုကဒ်များအတွက်မောင်းနှင်သူများသည် (ကမှဖြစ်သည်) ပြောရန်သာကျန်ရှိသည် အမြင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်) Linux ကိုထက်။
ငါ Wine beta version ကို install လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်သူ၌တည်ငြိမ်သော version များ၌မရှိသောတိုးတက်မှုများရှိပြီး၊ အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောတိုးတက်မှုများစွာနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ် version 1.3.28 တွင်ပိုမိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတာနဲ့သင် Wine နှင့် Winetricks ကို install လုပ်သင့်သည်။ Lutris ကိုထည့်သွင်းရန်လည်းသင့်တွင်ရှိသည်။ PlayOnLinux y စပျစ်ဥယျာဉ် အဲဒါအတော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာချန်ထားလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံးပြုလုပ်ရန်မှာ DirectX ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
DX Wine သည် DirectX ကိုတပ်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
WX တွင် DirectX 9c ကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သော Dx Wine (kuboode မှပြုလုပ်သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအစီအစဉ်) ကို download လုပ်ပါ။ Dxdiag ရှိဖို့သင့်တော်ပါတယ်။
Dx ဝိုင်ကို download လုပ်ပါ
သင့်တွင် DX10 နှင့် DX11 ကိုထည့်သွင်းရန်ရွေးစရာရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၌ရှိသည့်ဗီဒီယိုကဒ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အားလုံးပေါ်တွင်မူတည်သည်။
DxDiag, ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံး Wine မှာအသိအမှတ်ပြုခံရမလားဆိုတာသိဖို့အကောင်းဆုံး။
Visual Basic, .Net စသည်တို့
ထို့နောက် Winetricks နှင့်သင်ဂိမ်းတစ်ခုကစားရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သော်လည်းအောက်ပါပရိုဂရမ်များကိုသင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
- vcrun 2005 (Visual C ++ 2005)
- vcrun 2008 (Visual C ++ 2008)
- vcrun 2010 (Visual C ++ 2010)
- dotnet20 (Framework NET 2.0)
- dotnet30 (Framework NET 3.0)
- dotnet35 (Framework NET 3.5)
- dotnet40 (Framework NET 4) ။ ဒီဟာ Winetricks ထဲမှာမပေါ်ပါဘူး ၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ထည့်သွင်းရန်နောက်ထပ်အရာများစွာရှိသည်။ Winetricks ၏ရွေးချယ်မှုများကိုကောင်းစွာကြည့်ပါ။ သင်လိုအပ်သည့်အရာသည်သင်၏စက်နှင့်သင်အသုံးပြုလိုသော application ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်အထက်ပါသည်နိမ့်ကျပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
Winetricks ကိုဖွင့်ပြီး "Default wineprefix" နှင့် "Change settings" ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုမှာ -
- ddr = opengl
- dsoundhw = အတုယူ
- glsl = မသန်စွမ်း
- multisampling = မသန်စွမ်း
- mwo = enabled
- npm = repack
- orm = blackbuffer
- psm = enabled
- rtlm = အော်တို
- အသံ = alsa
- strictdrawordening = မသန်စွမ်း
- vd = ချွတ်
ဤရွေးချယ်မှုများထဲမှစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန် ၂ ခုရှိသည်
- OffscreenRenderingMode, FM (Framebuffer) option ကိုချိန်ညှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် frames များ၊ ခဲယဉ်းမှုများစွာနှင့်အတူတူပင်ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်သည်။ ဒါကြောင့်မဆိုဂိမ်း unplayable ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် backbuffering ကိုအကြံပြုတာပေါ့။
- တိုက်ရိုက်အသံ - Hardware Acceleration၊ လုံး ၀ ပြောင်းလဲခြင်း။ ၎င်းသည် "full" ထက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လိုက်ဖက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ရရန် GLSL နှင့် MultiSampling ကိုသင် disable လုပ်နိုင်သော်လည်းဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးဆုံးရှုံးသွားသည်။
အကယ်၍ WINE သည်ဤအရာများပြီးနောက်၌ပင်ဗွီဒီယိုကဒ်ကိုမတွေ့ပါက၊
သင်ရွေးချယ်မှုများကိုသင်ပြောင်းလဲပြီးသည်နှင့်သင်၏ .wine directory ထဲတွင်သင်၏ user folder ၌ဖွင့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် "user.reg" (ဖိုင်ကိုအသုံးပြုသူမှဖန်တီးသော registry key များသိမ်းဆည်းထားသော) ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်သည်။
အဲဒီမှာ [SoftwareWineDirect3D] ကိုရှာပြီးအဆုံးမှာ add:
"VideoDescription" = "videoDriver" = "nv4_disp.dll" "VideoMemorySize" = "ဗီဒီယိုကဒ်ပြားမှတ်ဉာဏ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ" ဖြင့်ကိုးကားထားသောဗီဒီယိုကဒ်ပြားပုံစံကိုထည့်ပါ။
[SoftwareWineDirect3D] 1318967087 "DirectDrawRenderer" = "opengl" "Multisampling" = "disabled" "NonPower2Mode" = "repack" "OffscreenRenderingMode" = "backbuffer" "PixelShaderMode" = "enabled" "RenderTargetLockMode" = "enable" "" UseGLSL "=" disabled "" VideoDescription "=" GeForce 7025 / nForce 630a / PCI / SSE2 / 3DNOW! " "VideoDriver" = "nv4_disp.dll" "VideoMemorySize" = "512"
ကျွန်ုပ်တို့သည် WIne, Dx Wine နှင့် Winetricks တို့ကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ Lutris ဟုခေါ်သောအစီအစဉ်ဖြင့်ဤအရာအားလုံးကိုတိုးမြှင့်သွားမည်။
Lutris သည် Steam နှင့်ဆင်တူသည့်တစ်ခုတည်းသောဂိမ်းအားလုံးကိုဂိမ်းများကိုစုစည်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
- Linux ဇာတိဂိမ်း။
- ၀ င်းဒိုးဇာတိဂိမ်းများ။
- MAME ဂိမ်းများ။
- သူငယ်ချင်း ၅၀၀၊ ၆၀၀၊ ၁၂၀၀ ။
- Atari 2600, 800, 800XL, 130XE, 5200, ST, STE, TT, Lynx ။
- Bandai WonderSwan, WonderSwan အရောင်။
- Quake Live၊ Minecraft နှင့် Flash ကဲ့သို့အွန်လိုင်း browser ဂိမ်းများ။
- Commmodore VIC-20, C64, C128, CBM-II, PLUS /4။
- LucasArt SCUMM (မျောက်ကျွန်း၊ အရူး Mansion) စသည်တို့ဖြစ်သည်။
- Magnavox Odyssey², Videopac + ။
- Mattel Intellivision ။
- Microsoft MSX၊ MS-DOS
- NEC PC-Engine Turbographx 16, Supergraphx, PC-FX ။
- Nintendo NES, SNES, Game Boy၊ Game Boy Advance၊ Gamecube နှင့် Wii တို့ဖြစ်သည်။
- Sega Master Sytem၊ Game Gear၊ Genesis၊ Dreamcast ။
- SNK Neo Geo၊ Neo Geo Pocket ။
- Sony Playstation ။
- Z-Machine ။
သို့သော်အကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက်သင့်အားရွေးချယ်စရာများစွာပေးသောကြောင့်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်မှာ Wine ရွေးချယ်မှုများစွာရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်ဂိမ်းပေါ် မူတည်၍ Wine နှင့်အခြားအရာများကိုထိခိုက်မှုမရှိပဲ ဂိမ်းများ။ ၎င်းသည် PlayOnLinux ကဲ့သို့ပင် Lutris သည်ကျွန်ုပ်အတွက် ပို၍ ကောင်းမွန်ပုံရသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင့်အား Windows ဂိမ်းများကိုသာမကအင်တာနက် emulators များသို့လည်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Lutris ကို download လုပ်ပါ
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ Lubuntu နှင့် Xubuntu တို့တွင်သိသာသောတိုးတက်မှုများမရှိဟုပြောပါ။ RAM memory နည်းတာကိုအသုံးပြုခြင်းသည် WINE စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Wine ကို CPU နဲ့ video card ကိုသုံးပြီးကိုင်တွယ်လို့ပါပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Linux မှာ Windows ဂိမ်းကစားနည်း
25 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
၎င်းသည် "WINdows Emulator" ("WINE") ကိုအတိအကျမဖော်ပြမီ၎င်းသည်ယခုဖြစ်သည်။
ငါ Linux မှာ windows games install လုပ်တာကိုစပြီးစမ်းသပ်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုရှာနေတာလဲကြည့်ပါ။ ငါ Quake 3, Half-Life 1 နှင့် Age of Mythology လေးခုကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်ပြီးဆော့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် GTA3(၎င်းကိုထည့်သွင်းထားသော်လည်းကစားနေစဉ် cd ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသော) နှင့်ငါ့ကိုအမှားတစ်ခုပေးသော Jedi Knight2ကိုကြိုးစားချင်သည်။
ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ace of Spades ကိုပြန်လည်စာပြန်ပါ
ငါ PC3 ဂိမ်းကို Windows7မှာတပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကမဖွင့်ဘူး။ ဒါကြောင့်သူကပြောင်းလဲပြီးပြောင်းလို့ရရင် Linux ကထောက်ပံ့ပေးရင်ကောင်းမယ်လို့ငါထင်တယ်။ ၁၀ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ပါ
၀ င်းဒိုးနှစ်ခုစလုံးကို ၀ င်းဒိုးနှစ်ခုစလုံးတွင် run ရန်ပြhaveနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Win XP တွင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ pc တွင် ram memory ပိုမိုထည့်ထားသော်လည်း win7 နှင့် cabal တို့တွင်အပြည့်အဝမ run နိုင်ပါ။ ပိုမို၍ လက်ရှိရှိပြီးဂရပ်ဖစ်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုရရှိခြင်းသည် win xp တွင်အပြည့်အဝမ run နိုင်ပါ။ သို့သော် win7 တွင်အပြည့်အဝလည်ပတ်ပါကကျွန်ုပ်သည် WINDOWS တွင် Fucked ဤအရာများကိုမုန်းသည်။ ငါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုကစားနိုင်အောင်ငါ့ရဲ့အရင်းအမြစ်တွေအားလုံးကိုစားတာအပြင် GAME BOSSTER၊ TUNAP UTILES တွေနဲ့ system တစ်ခုလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရတော့မယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူး။ operating7 သည်မှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်အခြားအရာများကိုမပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးပေါ်ရှိဂိမ်းဖိုလ်ဒါကိုကော်ပီကူးရန်နှင့်ကူးယူရန်မလုံလောက်သေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသည်။ ယခုသင် Linux disk ပေါ်တွင်သင်ကူးယူထားသည့်ဖိုဒါတစ်ခုကိုလည်းကူးယူရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို LIN ဟုခေါ်သည်။ ပထမတစ်ချက်တွင်သင်မြင်ရသည်။ အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ pss နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းသည် executable သည်စတင်သောအခါမည်သည့်လမ်းကြောင်းနှင့်လိုက်နာရန်လမ်းကြောင်းများနှင့်လိုက်နာရန်အချက်အလက်များရှိကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်သည်။ ချွေတာရန်အလိုရှိလျှင်သင်၏ပရိုဂရမ်နှင့်အတူ၊ မည်သည့်ပြPROနာမှမပါဘဲ .EXE GAME ၏ကစားနည်းနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားလမ်းကြောင်းတစ်ခု၏မည်သည့်ပျက်စီးမှုမဆိုကျွန်ုပ်၏လမ်းဖို့ကိုပျက်ဆီးစေနိုင်ပါကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ပြေးနိုင်သလား။
Miquel Mayol နှင့် Tur ဟုသူကပြောသည်
ထိုအတွက်, winehq နှင့် playonlinux တို့၏သဟဇာတဖြစ်မှုစာရင်းကသင့်အား ၁၀၀% အဆင်ပြေသောဂိမ်းများနှင့်လုံးဝမကောင်းမွန်သေးသောဂိမ်းများကိုသင့်အားအသိပေးသည်။
Miquel Mayol i Tur သို့ပြန်သွားရန်
အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီများသည် GNU / Linux အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းများကိုစတင်ထုတ်လွှင့်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Linux သုံးစွဲသူများသည်စုစုပေါင်းသုံးစွဲသူများ၏သိသိသာသာအချိုးအစားကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းသဘောပေါက်ရန်ကိစ္စဖြစ်သည်။
သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုများကြောင့်သင်သိသော Gomindos XD အကြောင်းကိုငါကြိုက်နှစ်သက်သည့်တစ်ခုတည်းသောဂိမ်းဖြစ်သည်။
ငါ lutris ကို download လုပ်လို့မရပါဘူး။ 🙁
သငျသညျအကြှနျုပျကိုဝိုင်, Winetricks နှင့် Lutris အားလုံး download လုပ်ဖို့ LINK ပေးနိုင်ပါသည်
Juan Manuel ဟုသူကပြောသည်
juan manuel သို့ပြန်သွားရန်
ငါမှာ ၀.၈၈zz နဲ့ p 0.8mb of pentium III ပါ ၀ င်ပါတယ်။ warcaft 650 ကိုဝိုင် mne ထဲမှာသုံးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းစားသုံးတာကနည်းနည်းလေးကြာလာတာနဲ့အမျှသူကနှေးသွားပြီး၊ windows တွေမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ၊ တခါတရံအချို့သောဖိုရမ်များတွင် ၀ င်းဒိုးကိုအလွန်အမင်းဝေဖန်ခြင်းသည်ပိုက်ဆံသာဖြစ်ကြောင်း (တစ်ခါတစ်ရံတွင်မှန်ပါသည်) သို့သော်အဆုံးတွင် Directx ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုကြသည်။ ငါပြတင်းပေါက်များနှင့် linux နှစ်ခုလုံးတွင်အားနည်းချက်များရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ Linux သည်ပရိုဂရမ်းမင်း၊ ဆာဗာများ၊ Windos သည်အိမ်အတွက်ပိုမိုအသုံးဝင်သော်လည်းဂိမ်း၊ စာရွက်စာတမ်း၊ အင်တာနက်စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဝိုင်ဖိုင်နှင့်အင်တာနက်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက် linux သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ဒါပေမယ့်ကစားရန်မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်နေ့ကျတော့ linux မှာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိလိမ့်မယ်
Eddy holliday ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ် Manjaro Linux ပေါ်မှာအဲဒါကိုသုံးလို့ရမလားဆိုတာကြည့်ပါ့မယ်
Eddy Holliday အားပြန်ပြောပါ
lutris နှင့် company သည် Linux တွင်ကစားရန်ဇိမ်ခံကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ UsemosLinux နှင့် cia တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ GNU / Linux လောကတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စုစုပေါင်း .. 🙂
ရဲ့ linux ကိုသုံးရအောင် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြaနာရှိနေပြီး DX Wine ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကြိုးစားသော်လည်း၎င်းနောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပါသည် http://sourceforge.net/projects/dxwine/ ၎င်းကိုမရရှိတော့ပါ။ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခြားနည်းလမ်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Juan Jose ဟုသူကပြောသည်
Juan jose အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ Ubuntu 15.10 ကျွန်တော့်မှာဂိမ်းတစ်ခုဒေါင်းလုပ်မရနိုင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလူတစ်ယောက်ကိုဖွင့်မပြနိုင်လို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။
Puff! ငါ Windows တွင်ရှိနေသည်။ ပရိုဂရမ် ၃ ခု (သို့) ၄ ခုကဲ့သို့ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်နှင့်ဂိမ်းကစားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ထက်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်ကစားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ Linux ကိုပရိုဂရမ်မာသူများသို့မဟုတ်ကွန်ယက်များနှင့်ဆာဗာများဖန်တီးသူများအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသော်လည်း၎င်းသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။
ယခုသင်ခန်းစာသည် Linux အတွက်ကစားခြင်းနှင့် Windows အတွက်ရေးသောဂိမ်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ Linux အတွက်ရေးသားထားသောဂိမ်းများသည် Linux တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ Windows အတွက် ၀ င်းဒိုးအတွက်ရေးထားသည့်ဂိမ်းများ - သင်သူတို့ကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။
ယခုသင် Windows တွင် Linux အတွက်ရေးထားသည့်ဂိမ်းတစ်ခုနှင့်မည်သို့ကစားနိုင်သည်ကိုမိမိကိုယ်ကိုမေးပါ။ နောက်တစ်နည်းကသင့်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူလျှင်သင် Linux ကိုစုပ်ယူသည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
Jose Luis အားပြန်ပြောပါ
ရာဖေး Portillo တီ ဟုသူကပြောသည်
Rafael Portillo T. ကိုပြန်ကြားခြင်း
Ubuntu ကိုစာသားပုံစံဖြင့် Boot လုပ်နည်း
KDE Tray အတွက်အကောင်းဆုံးအိုင်ကွန်များ